Madaxweyne Muuse Biixi oo Magacaabis Sameeyey – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay agaasimayaal iyo guddoomiyaal hay’addah madax banaan. Xilalkan ayaa qaarkood lagu soo dardaray agaasimayaal ka mid ah xukuumaddii hore ee Siiraanyo.
Halkan ka akhriso wareegtadda magacaabista xilalkan:
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxa uu maanta wareegto madaxweyne oo summadiisu tahay JSL/XM/WM/222-15/012018 ku magacaabay, masuuliyiintan.
Markaan Arkay: Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, Qodobka 90aad, Faqradiisa 3aad; Xarafaha (b), (kh) iyo (sh);
Markaan Arkay: Aqoontooda, Kartidooda iyo Waaya-aragnimadooda Shaqo;
1. Cali Cabdillaahi Daahir Xirsi Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Isgaadhsiinta iyo Tignoolajiyadda
2. Axmed Yuusuf Dirir Maxamed Hanti-dhawraha Guud ee Qaranka
3. Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye Faarax Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka
4. Cumar -sayid Cabdillaahi Aadan Qalinle Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka
5. Faysal Cali Sheekh Maxamed Cabdi Guddoomiyaha Hay’ ada U-diyaar Garawga Aafooyinka iyo Kaydka Raashiinka Qaranka
6. Cabdikariim Axmed Maxamed Faarax Guddoomiyaha Hay’adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka